အင်တာနက်မှာအဖြေရှာမတွေ့နိုင်မယ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်း(၅)ခု – Gentleman Magazine
အင်တာနက်မှာအဖြေရှာမတွေ့နိုင်မယ့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်း(၅)ခု
26/12/2016 22/12/2016 mmgentlemanmagazine
ဆေးဖက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိချင်တာတစ်ခုခုရှိလာပြီဆိုရင် ဘာလုပ်လေ့ရှိပါသလဲ။ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းက အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေတာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လူအများစုက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်သူဆရာဝန်တွေကို တိုက်ရိုက်မမေးပဲ အင်တာနက်မှာ အဖြေရှာလေ့ရှိရတဲ့ အကြောင်းရင်း သုံးခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက လူအများစုက တစ်ချို့မေးခွန်းတွေကို ဆရာဝန်ကိုမေးဖို့ ရှက်ရွံ့ကြတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ဆရာဝန်က သူတို့သိလိုတာကို အရေးတယူပြန်ဖြေပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆထားတာကြောင့် ဖြစ်ပြီး တစ်ချို့တွေကတော့ ဆရာဝန်နဲ့ တကူးတကတွေ့ဆုံ မေးမြန်းနေမယ့်အစား ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရှိရင် ကိုယ်တိုင်ပဲ Google မှာ ရှာကြည့်လို့ရတာပဲလို့ ယူဆထားတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Viagra ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ ???
၂။ တက်တိုစတီရုန်း ဘာလုပ်သလဲ? လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက တက်တိုစတီရုန်းပမာဏကို တိုးပွားစေသလား?
၃။ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ခံစားမှုကောင်းတာ ဘာကြောင့်လဲ ???
၄။ ကာလသားရောဂါတွေ ဘယ်လိုကူးစက်နိုင်သလဲ? ကူးစက်ခံရရင် ကုသပျောက်ကင်းနိုင်သလား ???
၅။ လိင်ဆက်ဆံမှုက ဘာကြောင့် နာကျင်ရတာလဲ ???
တကယ်တော့ တတ်သိပညာရှင် ဆရာဝန်တွေကို မေးမြန်းခြင်းမပြုပဲ အင်တာနက်မှာရှာဖွေတာဟာ ထင်တားသလောက် အထောက်အကူမဖြစ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် လိင်ကိစ္စတွေ၊ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် အင်တာနက်တခွင်မှာ ရှာဖွေမှုအများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေမှုအများဆုံး မေးခွန်း(၅)ခုကို ကျွမ်းကျင်သူတွေဆီကို တိုက်ရိုက်မေးမြန်းအဖြေရှာပေးထားပါတယ်။
Viagra ဆေးက လိင်တံထောင်မတ်မှုအတွက် အရေးကြီးဆုံးပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့ သွေးကြောတွေ ပြေလျော့မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ PDE5 လို့အမည်ပေးထားတဲ့ အင်ဇိုင်းမ်တွေပေါက်ဖွားစေပါတယ်။ ၄င်းကနေတဆင့် လိင်အင်္ဂါအတွင်းကို သွေးစီးဝင်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ထကြွလာလို့ လိင်တံထောင်မတ်လာချိန်မှာ သွေးစီးဝင်မှုတိုးလာပြီး ပြန်စီးထွက်မှုက လျော့နည်းသွားပါတယ်။ လိင်တံအတွင်းသွေးတွေနဲ့ ပြည့်သွားတဲ့အတွက် အရွယ်အစားကြီးမားထောင်မတ် မာကျောလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ Viagra ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာပါပဲ။
Testosterone ဟော်မုန်းဟာ အရိုးတွေဖွံ့ဖြိုးသန်မာဖို့၊ ကြွက်သားတွေကြီးထွားဖို့၊ လိင်စိတ်တက်ကြွဖို့၊ ဦးနှောက်ရဲ့ သိမှတ်ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက Testosterone ပမာဏကို ခေတ္တခဏတိုးပွားစေပါတယ်။ ရေရှည်မဟုတ်ပေမယ့်လည်း လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးကို ကြာရှည်စွာ ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါတွေမှာ အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့ အာရုံကြောတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ပါဝင်တက်ကြွမှုနဲ့ ကိစ္စပြီးမှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ်ခံစားရစေတာဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာ dopamine ဟော်မုန်းထွက်ရှိပြီး ကိစ္စပြီးတဲ့အခါမှာ သာယာမှုကို ခံစားရစေတာဖြစ်ပါတယ်။
Gonorrhea တို့၊ Chlamydia တို့လို ကာလသားရောဂါတွေဟာ လိင်ကနေတဆင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်ပြီး အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကြောင့် ကူးစက်တာဖြစ်ပါတယ်။ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေအားလုံးဟာ အမျိုးသားအမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါတွေထဲမှာ နေထိုင်ပြီး ပဋိဇီဝဆေးဝါးတွေနဲ့ ကုသပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်မှီကုသမှုမခံယူတဲ့အတွက် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရမှု များလာရင်တော့ အမျိုးသားတွေမှာ ဆေးရုံတက်ရတဲ့အထိဖြစ်နိုင်သလို အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း သန္ဓေမအောင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အသိသာအထင်ရှားဆုံး အကြောင်းရင်းကတော့ အမျိုးသားအင်္ဂါက အမျိုးသမီးအင်္ဂါဝထက် ကြီးမားနေတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် လိင်အင်္ဂါလမ်းကြောင်းမှာ ပိုးဝင်တာနဲ့ ရောင်ယမ်းတာတွေကြောင့်လည်း နာကျဉ်ရနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက လိင်ဆက်ဆံတိုင်းနာကျင်ပြီး အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ဆရာဝန်ဆီသွားရောက်ပြီး စမ်းသပ်ကုသမှုခံယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အငျတာနကျမှာအဖွရှောမတှနေို့ငျမယျ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ မေးခှနျး(၅)ခု
ဆေးဖကျဆိုငျရာအကွောငျးအရာတဈခုနဲ့ပတျသကျပွီး သိခငျြတာတဈခုခုရှိလာပွီဆိုရငျ ဘာလုပျလရှေိ့ပါသလဲ။ အလှယျဆုံးနညျးလမျးက အငျတာနကျမှာ ရှာဖှတောပဲ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။ လူအမြားစုက ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ၊ ဒါမှမဟုတျ ဆေးဖကျဆိုငျရာ အကွောငျးအရာတဈခုကို ကြှမျးကငျြသူဆရာဝနျတှကေို တိုကျရိုကျမမေးပဲ အငျတာနကျမှာ အဖွရှောလရှေိ့ရတဲ့ အကွောငျးရငျး သုံးခုရှိပါတယျ။ ပထမတဈခုက လူအမြားစုက တဈခြို့မေးခှနျးတှကေို ဆရာဝနျကိုမေးဖို့ ရှကျရှံ့ကွတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈခုကတော့ ဆရာဝနျက သူတို့သိလိုတာကို အရေးတယူပွနျဖွပေေးမှာ မဟုတျဘူးလို့ ယူဆထားတာကွောငျ့ ဖွဈပွီး တဈခြို့တှကေတော့ ဆရာဝနျနဲ့ တကူးတကတှဆေုံ့ မေးမွနျးနမေယျ့အစား ကှနျပြူတာတဈလုံးရှိရငျ ကိုယျတိုငျပဲ Google မှာ ရှာကွညျ့လို့ရတာပဲလို့ ယူဆထားတာကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
၁။ Viagra ဘယျလိုအလုပျလုပျသလဲ ???
၂။ တကျတိုစတီရုနျး ဘာလုပျသလဲ? လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးက တကျတိုစတီရုနျးပမာဏကို တိုးပှားစသေလား?
၃။ လိငျဆကျဆံတဲ့အခါ ခံစားမှုကောငျးတာ ဘာကွောငျ့လဲ ???
၄။ ကာလသားရောဂါတှေ ဘယျလိုကူးစကျနိုငျသလဲ? ကူးစကျခံရရငျ ကုသပြောကျကငျးနိုငျသလား ???
၅။ လိငျဆကျဆံမှုက ဘာကွောငျ့ နာကငျြရတာလဲ ???
တကယျတော့ တတျသိပညာရှငျ ဆရာဝနျတှကေို မေးမွနျးခွငျးမပွုပဲ အငျတာနကျမှာရှာဖှတောဟာ ထငျတားသလောကျ အထောကျအကူမဖွဈပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ လိငျကိစ်စတှေ၊ လိငျကတဆငျ့ကူးစကျတတျတဲ့ ရောဂါတှအေကွောငျးနဲ့ ပတျသကျရငျ အငျတာနကျတခှငျမှာ ရှာဖှမှေုအမြားဆုံးပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အငျတာနကျမှာ ရှာဖှမှေုအမြားဆုံး မေးခှနျး(၅)ခုကို ကြှမျးကငျြသူတှဆေီကို တိုကျရိုကျမေးမွနျးအဖွရှောပေးထားပါတယျ။
Viagra ဆေးက လိငျတံထောငျမတျမှုအတှကျ အရေးကွီးဆုံးပထမအဆငျ့ဖွဈတဲ့ သှေးကွောတှေ ပွလြေော့မှုကို အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ ဒီဖွဈစဉျမှာ PDE5 လို့အမညျပေးထားတဲ့ အငျဇိုငျးမျတှပေေါကျဖှားစပေါတယျ။ ၎င်းငျးကနတေဆငျ့ လိငျအင်ျဂါအတှငျးကို သှေးစီးဝငျမှုကို တိုးတကျကောငျးမှနျစတောဖွဈပါတယျ။ စိတျထကွှလာလို့ လိငျတံထောငျမတျလာခြိနျမှာ သှေးစီးဝငျမှုတိုးလာပွီး ပွနျစီးထှကျမှုက လြော့နညျးသှားပါတယျ။ လိငျတံအတှငျးသှေးတှနေဲ့ ပွညျ့သှားတဲ့အတှကျ အရှယျအစားကွီးမားထောငျမတျ မာကြောလာတာဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ Viagra ဘယျလိုအလုပျလုပျသလဲဆိုတာပါပဲ။
Testosterone ဟျောမုနျးဟာ အရိုးတှဖှေံ့ဖွိုးသနျမာဖို့၊ ကွှကျသားတှကွေီးထှားဖို့၊ လိငျစိတျတကျကွှဖို့၊ ဦးနှောကျရဲ့ သိမှတျဆငျခွငျနိုငျစှမျးတိုးတကျကောငျးမှနျဖို့အတှကျ အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာက Testosterone ပမာဏကို ခတ်ေတခဏတိုးပှားစပေါတယျ။ ရရှေညျမဟုတျပမေယျ့လညျး လကေ့ငျြ့ခနျးပုံမှနျလုပျခွငျးအားဖွငျ့ အကြိုးကြေးဇူးကို ကွာရှညျစှာ ခံစားရမှာဖွဈပါတယျ။
အမြိုးသားနဲ့ အမြိုးသမီး လိငျအင်ျဂါတှမှော အာရုံခံနိုငျစှမျးမွငျ့မားတဲ့ အာရုံကွောတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျပါဝငျတကျကွှမှုနဲ့ ကိစ်စပွီးမှုတို့ကို ဖွဈပျေါခံစားရစတောဖွဈပါတယျ။ လိငျဆကျဆံခြိနျမှာ dopamine ဟျောမုနျးထှကျရှိပွီး ကိစ်စပွီးတဲ့အခါမှာ သာယာမှုကို ခံစားရစတောဖွဈပါတယျ။
Gonorrhea တို့၊ Chlamydia တို့လို ကာလသားရောဂါတှဟော လိငျကနတေဆငျ့ကူးစကျတဲ့ရောဂါတှေ ဖွဈပွီး အကာအကှယျမဲ့လိငျဆကျဆံမှုကွောငျ့ ကူးစကျတာဖွဈပါတယျ။ လိငျကတဆငျ့ကူးစကျရောဂါတှအေားလုံးဟာ အမြိုးသားအမြိုးသမီး လိငျအင်ျဂါတှထေဲမှာ နထေိုငျပွီး ပဋိဇီဝဆေးဝါးတှနေဲ့ ကုသပြောကျကငျးနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခြိနျမှီကုသမှုမခံယူတဲ့အတှကျ ရောဂါပိုးကူးစကျခံရမှု မြားလာရငျတော့ အမြိုးသားတှမှော ဆေးရုံတကျရတဲ့အထိဖွဈနိုငျသလို အမြိုးသမီးတှမှောလညျး သန်ဓမေအောငျတာမြိုးတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
အသိသာအထငျရှားဆုံး အကွောငျးရငျးကတော့ အမြိုးသားအင်ျဂါက အမြိုးသမီးအင်ျဂါဝထကျ ကွီးမားနတောကွောငျ့ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ လိငျအင်ျဂါလမျးကွောငျးမှာ ပိုးဝငျတာနဲ့ ရောငျယမျးတာတှကွေောငျ့လညျး နာကဉျြရနိုငျပါတယျ။ အရေးကွီးတာက လိငျဆကျဆံတိုငျးနာကငျြပွီး အဆငျမပွဘေူးဆိုရငျ ဆရာဝနျဆီသှားရောကျပွီး စမျးသပျကုသမှုခံယူဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။
Previous: အပြာဇာတ်ကားတစ်ခု နောက်ကွယ်မှ အမှန်တရားများ
Next: အမေရိကန်က မုဒိန်းမှု မမြောက်တဲ့ ဥပဒေ